Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezivuselelwe » Ukuhlanganisa ama-DC Heroes nama-Villians nge-Game Game
Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! • Izindaba Ezivuselelwe
Umdlalo weselula we-puzzle RPG wokuqala oqukethe abalingiswa besithonjana se-DC ufika ngo-2022 futhi manje uvulelwe ama-pre-gesitrations.
Umakhi wezokungcebeleka ohamba phambili uLudia, isitudiyo seJam City, namuhla wethule i-DC Heroes & Villains, umdlalo wokudlala umdlalo we-puzzle wokuqala (RPG) wokuqala obekwe ku-DC Universe, onikezwe ilayisensi yiWarner Bros. Interactive Entertainment esikhundleni seDC. Umdlalo uzojabulisa abalandeli bamahlaya e-DC ngendaba yoqobo enabalingisi bezinkanyezi bonke bama-Super Heroes abathandekayo nama-Super-Villains afaka uBatman, uSuperman, uWonder Woman, uJoker noHarley Quinn. I-DC Heroes & Villains izotholakala emhlabeni wonke ekuqaleni kuka-3 ku-App Store naku-Google Play. Kusukela namuhla, amaqhawe kanye nama-villains ngokufanayo angabhalisela ngaphambili ukufinyelela kumdlalo futhi athole izinto ezikhethekile zamabhonasi lapho kwethulwa, ku-www.dcheroesandvillains.com.
Okufaka ukulandisa okunothile, kwasekuqaleni, i-DC Heroes & Villains kuletha izindawo ezinesithonjana semigwaqo yaseGotham City kanye nokujula kwe-Atlantis empilweni. Umdlandla ongaqondakali ususile wonke amandla amakhulu futhi kuzoba kubadlali ukuqasha iqembu lamandla lokugcina, kuzo zombili izinhlangothi zobulungiswa, ukunqanda ukuqothulwa ngokuphelele.
Abadlali bazodinga ukwenza amasu njengoba bedabula umdlalo wegeyimu we-DC Heroes & Villains, ogcwele izimpi zomdlali oyedwa-eziyinselele nemicimbi yeqembu lapho bezodinga ukuhlanganisa abantu abasebenza nabo ukuze banqobe abaphathi ukuthola imivuzo ye-epic. Imicimbi ebukhoma ehleliwe kufaka phakathi ukufana kwe-PVP kanye ne-Guild Raids izoletha abalandeli be-DC abavela kuwo wonke umhlaba ukuba bahlanganyele empini yemiklomelo ekhethekile kumdlalo.
"Siyaziqhenya ngokumemezela isihloko sethu esisha, i-DC Heroes & Villains," kusho u-Alex Thabet, isikhulu esiphezulu seLudia. “Lo mdlalo ukhombisa okuhamba phambili kweLudia, ngokudlala umdlalo ohehayo nobuchwepheshe obusha okuyizimpawu zemidlalo yethu ewina imiklomelo. Sikholwa ukuthi lokhu kuzonikeza abalandeli be-DC umbono omusha ngokuphelele wabalingiswa, imvelo nendlela abathanda ngayo. ”
"Besingeke sihlatshwe umxhwele kakhulu yi-DC Heroes & Villains, ebeka ithalente likaLudia nobuciko ekuboniseni ngokugcwele," kusho uChris DeWolfe, ongumsunguli nomqondisi omkhulu weJam City. “Lokhu kuzobe kungokokuqala abalandeli beDC bezakhela amaqembu abo amaphupho emdlalweni wokulingisa u-match-3, ohlanganisa amaqhawe nezikhohlakali. Ngiyathemba ukuthi abalandeli bazoshaywa umoya ngabazokwenza kulo mdlalo. ”
IJam City isanda kuqeda ukuthola iLudia ngoSepthemba 2021, ngokuqhubeka nokufeza inhloso yenkampani yokuqinisa iphothifoliyo yayo yomhlaba yezitudiyo eziphambili ezithuthukisa futhi zishicilele imidlalo ephezulu kakhulu eyenziwe ngaphakathi neyesithathu enamalayisense asekelwe kwi-IP.